लगानीकर्तालाई हाइड्रोमा लगानीको अवसर, अब विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई सेयर विक्री गर्ने — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उर्जा > लगानीकर्तालाई हाइड्रोमा लगानीको अवसर, अब विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई सेयर विक्री गर्ने
लगानीकर्तालाई हाइड्रोमा लगानीको अवसर, अब विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई सेयर विक्री गर्ने
काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दोस्रो आर्थिक पुर्नसंरचनासम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको २० बुँदे प्रस्तावमा सर्वसाधारणलाई सेयर दिने उल्लेख गरिएको छ ।
सेयर जारी गर्दा संस्थालाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न लागेको जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको ऐन २०४१ को दफा ५ को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले यसका लागि सेयर संरचना परिवर्तन गर्न पनि प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावमा सर्वसाधारणलाई कति सेयर दिन सकिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।
अर्थमन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव अघि बढाएको जनाएको छ । ऊर्जा र प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग पटकपटक छलफल गरेपछि अर्थले पुनर्संरचनाबारे प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेको छ । उक्त समितिमा अर्थको बजेट महाशाखा र निजीकरण एकाइ महाशाखा, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्न संस्था, महालेखा नियन्त्रक र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिले प्राधिकरणले गरेको पुनर्संरचनाको प्रस्तावबारे अध्ययन गर्नेछ ।
प्रकाशित मितिः २०७३ चैत ३०
२०७३ चैत्र ३० गते १३:२७ मा प्रकाशित
प्रतिबन्धित भारु साढे चार हजारका दरले साटिने
८ किलो सुनचाँदीसँगै सिसिक्यामरा चोरी !
भोलिबाट अझै घट्ने भो लोडसेडिङ्ग !
काठमाडौंमा घर वनाउँनेलाई एसएमएसबाटै महानगरले दिनथाल्यो यस्तो सूचना
अब कक्षा १ देखि ८ सम्मका सबै पुस्तक रंगीन
यी हुन् बढुवा भएका शिक्षकहरु (नामावलीसहित)